Kubonakala ngathi iApple Silicon M2 sele iza kuba kwimveliso | IPhone iindaba
Ukufika kweprosesa entsha yeekhompyuter zeMac ngokungathandabuzekiyo yayiyimpazamo kwitafile yenkampani yeCupertino. Okwangoku ezi Iiprosesa ze-Apple Silicon M1 zezona zinamandla, ezona zilawula kakuhle izixhobo kwaye ngokungathandabuzekiyo zibiza kancinane zombini kubasebenzisi kunye nenkampani uqobo.
Kubonakala ngathi isizukulwana esilandelayo se-M2 chip "siza kuba sehovini" njengoko besitsho. Ngale nto sithetha ukuba akakhange aqinisekise kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ukuba iiprosesa ezintsha zika-Apple ziya kuba sele zikwimveliso. Kwakukho ukuthandabuza malunga nokukhethwa kwe-chip ye-M1X okanye ngokuthe ngqo tsiba uye kwi-M2 kunye Kubonakala ngathi le iyakuba yeyokufika ekugqibeleni kwisiqingatha sesibini salo nyaka.
Ngokumangalisayo iApple ikhuphe i IPad entsha entsha kule Aprili iphelileyo iprosesa ye-M20 ke bekuvakala ukuba inkampani ayizukumilisela iprosesa entsha kude kube lonyaka olandelayo. Kubonakala ngathi ekugqibeleni ayizukuba njalo kwaye inkampani yaseCupertino sele inenguqulo yesibini yezi processor ezinamandla zilungile.
Kungenzeka ukuba iiprosesa ezintsha sele ziza nesiseko esingaphezulu okanye kunye neetransistor ezincinci, oku kwenza ukuba amandla ombane abengcono kwaye ngokuchanekileyo banamandla ngakumbi. Kubonakala ngathi phambi kokuphela konyaka siza kuba neeprosesa ezintsha ze-M2 kuzo zombini iiMacBook Pro kunye neMac kwaye yile I-iMac ye-intshi ezingama-27 khange iboniswe nge-20 ka-Epreli odlulileyo. Nye MacRumors Baphindaphindene neendaba ezipapashwe nguNikkei ke iindaba ekugqibeleni zanwenwa okomlilo wedobo kunethiwekhi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Kubonakala ngathi iApple Silicon M2 sele izakube ikwimveliso